Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 16:1-28
Kukumbira chiratidzo (1-4)
Mbiriso yevaFarisi nevaSadhusi (5-12)
Makiyi eUmambo (13-20)
Ungano yakavakirwa padombo (18)
Jesu anotaura nezverufu rwake (21-23)
Kuva mudzidzi wechokwadi (24-28)
16 VaFarisi nevaSadhusi vakabva vasvika kwaari, uye vachida kumuedza, vakamukumbira kuti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga.+ 2 Akavapindura kuti: “Kana ava manheru munoti, ‘Kunze kuchange kwakanaka, nekuti denga rakati piriviri,’ 3 uye mangwanani munoti, ‘Kunze kuchatonhora, nhasi kuchanaya, nekuti denga rakati piriviri asi kwakakwidibira.’ Munoziva kududzira zvinenge zvakaita denga, asi hamugoni kududzira zviratidzo zvenguva. 4 Chizvarwa chakaipa uye cheupombwe* chinoramba chichitsvaga chiratidzo, asi hapana chiratidzo chachichapiwa+ kunze kwechiratidzo chaJona.”+ Saka akabva ipapo, achivasiya. 5 Vadzidzi vakabva vayambuka mhiri uye vakakanganwa kutakura chingwa.+ 6 Jesu akati kwavari: “Rambai makangwarira, muchenjerere mbiriso yevaFarisi nevaSadhusi.”+ 7 Saka vakatanga kutaurirana vachiti: “Tasiya chingwa.” 8 Achiziva izvi, Jesu akati: “Nei muri kutaura nyaya yekuti hamuna chingwa, imi mune kutenda kudiki? 9 Hamusati manzwisisa here nanhasi, kana kuti makanganwa here zvingwa zvishanu zviya zvakadyiwa nevanhu 5 000, uye kuti makazadza tswanda ngani?+ 10 Kana zvingwa zvinomwe zviya zvakadyiwa nevanhu 4 000 uye kuti makazadza matengu mangani?+ 11 Saka sei musiri kunzwisisa kuti handisi kutaura nemi nezvechingwa? Asi chenjererai mbiriso yevaFarisi nevaSadhusi.”+ 12 Vakabva vanzwisisa kuti akanga asiri kutaura kuti vachenjerere mbiriso yechingwa, asi dzidziso yevaFarisi nevaSadhusi. 13 Paakanga asvika munharaunda yeKesariya Firipi, Jesu akabvunza vadzidzi vake kuti: “Vanhu vari kuti Mwanakomana wemunhu ndiani?”+ 14 Ivo vakati: “Vamwe vanoti ndimi Johani Mubhabhatidzi,+ vamwe Eriya,+ vamwewo vachiti Jeremiya kana mumwe wevaprofita.” 15 Iye akati kwavari: “Ko imi, munoti ndini ani?” 16 Simoni Petro akapindura kuti: “Ndimi Kristu,+ Mwanakomana waMwari mupenyu.”+ 17 Jesu akabva ati kwaari: “Unofara iwe Simoni mwanakomana waJona, nekuti nyama neropa hazvina kukuzivisa* izvozvo, asi Baba vangu vekudenga ndivo vadaro.+ 18 Uyewo, ndinoti kwauri: Ndiwe Petro,+ uye padombo iri+ ndichavakira ungano yangu, uye magedhi eGuva* haazoikundi. 19 Ndichakupa makiyi eUmambo hwekudenga, uye chese chaungasunga panyika chinenge chatosungwa kudenga, uye chese chaungasunungura panyika chinenge chatosunungurwa kudenga.” 20 Akabva audza vadzidzi kuti vasatomboudza chero munhu kuti iye akanga ari Kristu.+ 21 Kubvira ipapo, Jesu akatanga kutsanangurira vadzidzi vake kuti anofanira kuenda kuJerusarema onotambudzwa nenzira dzakawanda nevakuru, nevatungamiriri vevapristi, nevanyori, ourayiwa, ozomutswa pazuva rechitatu.+ 22 Petro akabva aenda naye parutivi, akatanga kumutsiura, achiti: “Musabva mazvidaro* Ishe; izvi hazvingamboitiki kwamuri.”+ 23 Asi achitendeuka, akati kuna Petro: “Siyana neni* Satani! Uri chinhu chinogumbura kwandiri, nekuti haufungi zvinofungwa naMwari, asi zvinofungwa nevanhu.”+ 24 Jesu akabva ati kuvadzidzi vake: “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atore danda rake rekutambudzirwa,* arambe achinditevera.+ 25 Nekuti munhu wese anoda kuponesa upenyu hwake* acharasikirwa nahwo, asi munhu wese anorasikirwa neupenyu hwake* nekuda kwangu achahuwana.+ 26 Ko zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yese orasikirwa neupenyu hwake?*+ Munhu angapa chii kuti arege kurasikirwa neupenyu hwake?*+ 27 Nekuti Mwanakomana wemunhu achauya ari mukubwinya kwaBaba vake aine ngirozi dzake, uye achabva aripa mumwe nemumwe maererano nezviito zvake.+ 28 Chokwadi ndinoti kwamuri pane vamwe vamire pano vasingazomboraviri rufu vasati vaona Mwanakomana wemunhu achiuya muUmambo hwake.”+
^ Kana kuti “nekuti haasi munhu akuzivisa.”
^ Kana kuti “eHadhesi.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “Zvinzwirei mutsa.”